ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ် ချုပ်မယ်ဆိုလျှင် - Myanmar Mega Property Co., Ltd
Posted on September 27, 2021 September 27, 2021 .by San Aung.Posted inLaw, Real Estate. No comments yet	.
စိန်၊ရွှေအစရှိသည့်ရွေ့ပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးကမ်းတဲ့နေရာမှာစာချုပ် ချုပ်ပြီးပေးကမ်းလို့လည်းရတယ်၊စာချုပ်မချုပ်ဘဲလည်းပေးလို့ရပါတယ်။ မြေ၊အိမ် အစရှိတဲ့မရွေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ရာကိုပေးကမ်းမယ်ဆိုလျှင်တော့ပေးကမ်းခြင်းစာချုပ်ပြုလုပ်ရပါမယ်။ပေးကမ်းစာချုပ်ဟာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ရပါမည်……
၄။ ပစ္စည်းရသူ ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပစ္စည်းပေးကမ်းတာကိုသဘောတူတဲ့အကြောင်း၊လက်ခံတဲ့အကြောင်း ဖွင့်ဟ၀န်ခံပြီး လက်မှတ်ရေးထိုးရပါမည်။
၅။ စာချုပ်ကိုရေစစ္စရီမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့တံဆိပ်ခေါင်းအလုံအလောက်ထမ်းဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား-၁၊အပိုဒ်၃၃အရပစ္စည်းရဲ့တန်ဖိုးအပေါ်မှာခေါင်းပါစာချုပ်နဲ့ရေးသားချုပ်ဆိရပါမယ်။ ပစ္စည်းပိုင်ရင်အနေနှင့်မိမိပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်ပေးကမ်းခွင့်ရှိတယ်လို့အခြေခံသဘောအားဖြင့်ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ်ိ့မိပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးပေးခွင့် ရှိ၊မရှိ ဆိုတဲ့ပြဿ်ာတစ်ရပ်ရှိလာပါတယ်။၁၉၄၉ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံး၊လွှတ်တော်စာမျက်နှာ ၄၇၁ အမှုမှာပါတဲ့အချက်ဟာသတိပြုရမယ့်အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်၂၇နှစ်အရွယ်ရှိဒေါ်ရွှေရီဆိုသူဟာမသေမီ၉ရက်အလ်ိုမှာမှတ်ပုံတင်အရာရှိက်ိုအိမ်ကိုခေါ်ပြီးပေးကမ်းစာချုပ်ပြုလုပ်မှတ်ပုံတင်စေပါတယ်။စာချုပ်မှာသူ့ရှိသမျှပစ္စည်းအားလုံးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ကိုပြုစုနေခဲ့တဲ့သူကိုပေးကမ်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ရွှေရီဟာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာကိုယ်ရေပြားရောဂါဖြစ်နေပြီးမှတ်ပုံတင်စာချုပ်ချုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီစာချုပ်ကိုမြန်မာ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကအတည်မပြုပါ။တရားလွှတ်တော်ကအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်ပြပါသည်။ ပထမအကြောင်းကသေခါနီးဆဲဆဲပေးကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြောင်းကသေသူဟာရှိသမျှပစ္စည်းအားလုံးကိုပေးကမ်းတာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်စီရင်ထုံးနဲဓမ္မသတ်ခြောက်စောင်တွဲအခန်း၈၊ပုဒ်မ ၇၅တို့ကိုထောက်ထားပြီးပစ္စည်းရှင်ဟာမိမိပိုင်ပစ္စည်းကိုမိမိဆန္ဒအလျောက်ပေးကမ်းခွင့်ရှိပေမယ့်အမွေစားအမွေခံတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုထိခိုက်လောက်အောင်ရှိသမျှပစ္စည်းအားလုံးပေးကမ်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပါ။ ပေးကမ်းခြင်းဆိုင်ရာစာချုပ်မှတ်စု
၁။မရွေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးကမ်းတာဆိုလျှင်စာချုပ်ပြုလုပ်ချုပ်ဆိုရပါမည်။၂။အဆိုပါစာချုပ်ကိုမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။၃။အလိုအလျောက်မေတ္တာသက်၀င်ချစ်ခင်မှုဖြင့်ပေးကမ်းတာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။၄။ပေးကမ်းခြင်းခံရသူကပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသဘောတူကြောင်းဖော်ပြပါရှိရပါမယ်။၅။ပေးကမ်းတဲ့ပစ္စည်းစာရင်းဇယားဖော်ပြပါရှိရပါမယ်။၆။ဆိုင်ရာကထုတ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတည်ရှိရာမြေပုံ၊မြေရာဇ၀င်ပူးတွဲပါရှိရပါမယ်။၇။ပေးကမ်းသူပိုင်ဆိုင်ကြောင်းမရွေ့မပြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားပူးတွဲဖော်ပြပါရှိရပါမယ်။၈။စာချုပ်မှာအသိသက်သေနှစ်ဦးအနည်းဆုံးပါရှိရပါမယ်။၉။ပေးကမ်းစဉ်မှာပေးသူအနေနဲ့အသက်ရှင်လျက်ရှိပြီးမှပေးနိုင်ခွင့်ရှိပါမယ်။၁၀။လက်ခံသူအနေနဲ့လည်းအသက်ရှင်ဆဲလက်ခံနိုင်ပါမယ်။သေဆုံးမှဆိုလျှင်ပေးကမ်းခြင်းပျက်ပြယ်ပါမည်။၁၁။တည်ရှိလတ္တံပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ် အနာဂါတ်ပစ္စည်းကိုပေးကမ်းခြင်းမပြုနိုင်ပါ။၁၂။အပေးခံရတဲ့သူဟာတစ်ဦးထက်ပိုနေပြီးတစ်ဦးကပေးကမ်းတာကိုလက်မခံရင် လက်မခံသူအတွက်သာပေးကမ်းခြင်းပျက်ပြယ်ပြီးကျန်လက်ခံသူတွေအတွက်တေတော့ပေးကမ်းခြင်းကအတည်ဖြစ်ပါတယ်။၁၃။ပေးသူပိုင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုပေးတာဆိုလျှင်ပေးစဉ်အခါကပေးသူမှာတင်ရှိနေတဲ့ကြွေးမြီးအားလုံးအတွက်ပေးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အညီလက်ခံမှာတာ၀န်ရှိပါသည်။၁၄။ပစ္စည်းတန်ဖိုးအပေါ်တံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား(၁)အပ်ိုဒ်၃၃နဲ့အညီတံဆိပ်တော်ခေါင်းထမ်းဆောင်ရပါမည်
။#crd to original uploder #myanmarmegaproperty #law #realestate
Previous post: သင့်ကား အင်ဂျင်ဝိုင်လဲတဲ့အခါ သတိထားသင့်တဲ့ အချက် (၃) ချက်
Next post: “#တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ်မှာ#အခွန်ဆောင်ရပါသလား”